Monday February 09, 2015 - 00:57:21 in Wararka by Web Admin
Ciyaarta ayaa ku billaabatay weerar iyo weerar celis, iyadoo 90-kii daqiiqo ee loogu talo-galay kusoo gaba-gabowday 0-0, waxaana lagu daray waqti dheeaad ah oo 30-daqiiqo ahaa, waxayna ku dhamaatay 0-0.
Intaa kaddib waxaa labada xul loo dhigay rigoogayaal ama gool ku laadyo si ay u kala baxaan, waxaana koox walba ay tuuratay min 11 gool-ku-laad, iyadoo xulka Ivory Coast uu dhaliyay 9-gool, labana ay ka khasaartay, halka xulka Ghana ay dhaliyeen 8-gool saddexna ay ka khasaartay.
Gool-ku-laadka ay ku guuleysatay xulka Ivory Cost waxaa u dhaliyay gool-hayahooda, kaddib markii uu kubadda ka qabtay gool-hayihii kooxdii ay wada ciyaarayeen ee Ghana, taasoo u suuro-gelisay Ivory Coast in xulka Ivory Coast ay guushu ku raacdo halkaas.
Xulka Ivory Coast ayaa waxaa la dhihi karaa waxaa xalay badbaadiyay gool-hayahooda oo qabtay lab aka mid ah gool-ku-laadyadii ay tuurteen qaar ka mid ah ciyaaryahannada xulka Ghana.
Ciyaartoydii xulka Ghana ayaa markii laga guuleystay billaabay inay gabi ahaantooda ilmeeyaan, halka kuwii Ivory Coast ay farxad la bood-boodeen gudaha garoonkii ciyaartu ka dhacaysay.
Kooxda kubadda cagta Ivory Coast ayaa sidan oo kale rigoorayaal kaga badiyay kooxda Chana ciyaartii finalka ahayd ee Koobka Qaramada Afrika ee sannadkii 1992-kii, iyadoo tani ay noqonayso markii labaad oo xulka Ghana lagu quusiyo rigoorayaal.
Si kastaba ha ahaatee, xulka Ivory Cost oo ay xalay u ciyaarayeen labada ciyaartoy ee walaalaha ah Yaye Toure iyo Kole Toure ayaa si rasmi ah u noqday horyaalka Qaaradda Afrika ee sannadkan iyo kan xiga.